Abavelisi beeMveliso kunye nabaBoneleli-iFactory yaseTshayina yeeMveliso
I-EEC L7e Ilori yokuLawula yoMbane-Iponi
Ilori yombane kaYunlong enemvume ye-EEC L7e yenzelwe ngokukodwa zonke izicelo apho ukuthembeka, umgangatho wokuvelisa kunye noyilo olusebenzayo zizinto eziphambili.Esi sithuthi sombane sisiphumo seminyaka yamava kunye neemvavanyo kulo mmandla.
Ukubekwa:Kumalungiselelo orhwebo, izithuthi zoluntu kunye nezithuthi ezikhaphukhaphu zomthwalo ngokunjalo neemayile zokugqibela zokuhanjiswa.
Immimiselo yokuhlawula:T/T okanye L/C
Ukupakisha kunye nokuLayisha:Iiyunithi ezi-4 ze-1 * 40HQ.
I-Yunlong EEC L2e i-tricycle yombane-J3 yi-tricycle yombane ekwazi ukuthwala abantu aba-2-3, ngokufanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno zentsapho ukuba iphume.Inobukeka obuhle, ukusebenza kakuhle kunye nokhuseleko oluphezulu.Inokuhamba iikhilomitha ezingama-70-80 ngentlawulo enye, kwaye isantya esiphezulu yi-35km/h.
Ukubekwa:Ijongeka ngathi yimoto encinci kodwa ine-high-grade, ekhuselekileyo, kunye ne-air-conditioned cabin, iqonga elikhethekileyo livumela le moto ukuba iqhube ukuphepha ukuhamba kunye neengxaki zokupaka.
Ukupakisha kunye nokuLayisha:Iiyunithi ezi-4 ze-1 * 20GP;Iiyunithi ezili-10 ze-1 * 40HQ.
I-EEC L6e Ikhabhinethi yoMbane yeCar-J4
I-EEC L6e Ikhabhinethi yoMbane yeCar-J4 ngumzekelo omtsha ophuhliswe kwaye uveliswa yiYunlong Company.Kufanelekile kakhulu ukuba abantu abadala bahambe.Ikhuselekile kwaye ikhululekile, inamava okuqhuba kakuhle, ayingcolisi, kwaye inokusetyenziswa endleleni ngaphandle kwelayisensi yokuqhuba, ekulungele ukuhamba.
Ukubekwa:Ukuqhuba umgama omfutshane kunye nohambo lwemihla ngemihla, ikunika inketho yezothutho eguquguqukayo enokuthi ijikeleze, yenza ubomi bakho bemihla ngemihla bube lula kakhulu.
Indawo: Nikeza ngendlela eluhlaza kunye ne-eco yokuhambahamba.Ukukhwela i-Eco kuhambo lwemihla ngemihla, ukuqhuba umgama omfutshane, ukuthatha uhambo oluya kwiivenkile zasekhaya kunye neenkonzo, zilungele ukujikeleza idolophu.
Ukuma:Ukuqhuba umgama omfutshane kunye nokuhamba yonke imihla.Ikunika inketho yezothutho eguquguqukayo enokuthi ijikeleze, yenza ubomi bakho bemihla ngemihla bube lula kakhulu.
Ukuma: Isisombululo esifanelekileyo solungiselelo kunye nokuhanjiswa kwempahla eco-friendly & nokuthutha.Ukuhanjiswa kwemayile yokugqibela kunye nezisombululo zolungiselelo.
Isikhundla: Isisombululo esifanelekileyo sokuhanjiswa kokutya kunye nokuhanjiswa kwekhonkco elibandayo kunye nokuthutha ezixekweni, ukubumbana ukuhamba ngokulula kumbindi wesixeko.
Ukuma:Ukuqhuba umgama omfutshane kunye nohambo lwemihla ngemihla.Ikunika inketho yezothutho eguquguqukayo enokuthi ijikeleze, yenza ubomi bakho bemihla ngemihla bube lula kakhulu.